ဲမြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစိန်(ဝဲ )နှင့် တူရကီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Ahmet Davutoglu (ယာ)။ (ဓာတ်ပုံ-နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးဝဘ်ဆိုဒ်)xဲမြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစိန်(ဝဲ )နှင့် တူရကီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Ahmet Davutoglu (ယာ)။ (ဓာတ်ပုံ-နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးဝဘ်ဆိုဒ်)
မိတ္ထီလာမြို့မှာ ကြေညာထားတဲ့ အရေးပေါ် အခြေအနေကို ၂ လ သက်တမ်း ထပ်တိုးဖို့ လွှတ်တော်အတည်ပြု၊ မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေးတိုးတက်မှု IMF ပြောဆို၊ အမေရိကန် Oklahoma ပြည် နယ် လေဆင်နှာမောင်း တိုက်ခတ်ပြီးနောက် ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ ပြန် လည် ထူထောင်ရေး အခြေအနေ စသည့် ထိပ်တန်းသတင်းများ မြန်မာသံရုံးတိုက်ခိုက်ဖို့သံသယရှိသူနောက်ထပ် ၂ ဦး အင်ဒိုရဲဖမ်းဆီး KIO နဲ့ အစိုးရဆွေးနွေးပွဲ မြစ်ကြီးနားတွင်ပြုလုပ်မည် ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် မြန်မာပြည်လာမည် ၈၀ ကျော် ဂျပန်ဖိုးဖိုး ဧ၀ရက်တောင် တက်ရောက် မြန်မာနိုင်ငံက စိတ်ကြွဆေးပြား ၄ သန်းခွဲ ဘန်ကောက်မှာဖမ်းမိ မြန်မာအပေါ် ပိတ်ဆို့မှု ဆက်ထားဖို့ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေ တိုက်တွန်း အများဆုံးဖတ်ရှုသည့် သတင်းများ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု ဆီနိတ်တာ McConnell ဆန့်ကျင် မြန်မာနိုင်ငံက စိတ်ကြွဆေးပြား ၄ သန်းခွဲ ဘန်ကောက်မှာဖမ်းမိ မြန်မာအပေါ် ပိတ်ဆို့မှု ဆက်ထားဖို့ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေ တိုက်တွန်း Oklahoma ဘေးဒုက္ခ အမေရိကန် ကုန်ကျစရိတ် အများဆုံးထဲပါဝင် မြန်မာ့စီးပွားရေး အလားအလာကောင်း IMF ခန့်မှန်းအများဆုံးအီးမေးပို့သည့် သတင်းများ မြန်မာ့လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေ စိုးရိမ်ရဆဲ AI သုံးသပ်အများဆုံးကြည့်ရှုသည့် ဗွီဒီယိုသတင်းများ နေ့စဉ်တီဗွီသတင်းလွှာ (၀၅-၂၃-၂၀၁၃) Oklahoma လေဆင်နှာမောင်း ကယ်ဆယ်ရေး မြန်မာ့စီးပွားရေး IMF ခန့်မှန်းချက် ကြာသပတေးနေ့မြန်မာတီဗွီသတင်းကမ္ဘာ့သတင်း စက္ကန့် ၆၀ VOA60 World